Ngaba Unokuba Ngumhlobo KaThixo? | Sondela
1, 2. (a) Yintoni esenokubonakala ingenakuze yenzeke kwabaninzi, kodwa iBhayibhile isiqinisekisa ngantoni? (b) Bubuphi ubuhlobo obusondeleyo awayenabo uAbraham, yaye ngoba?
UBUYA kuvakalelwa njani ukuba uMdali wezulu nomhlaba ubenokuthi ngawe, “Ngumhlobo wam lo”? Kwabaninzi, kusenokubonakala kungenakuze kwenzeke oko. Ngapha koko, umntu unokuba nabo njani ubuhlobo noYehova uThixo? Ukanti, iBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba sinako ngokwenene ukusondela kuThixo.
2 UAbraham wamandulo wayengomnye wabo banandipha ubuhlobo obusenyongweni ngolo hlobo. UYehova wambiza loo solusapho ngokuthi “umhlobo wam.” (Isaya 41:8) Ewe, uYehova wayemgqala uAbraham njengomhlobo wakhe. Into eyamenza uAbraham waba nolwalamano olusondele ngolo hlobo kukuba “wakholwa kuYehova.” (Yakobi 2:23) Nanamhlanje, uYehova ukhangela amathuba ‘okunamathela’ kwabo bamkhonza ngokuqhutywa luthando. (Duteronomi 10:15) ILizwi lakhe libongoza lisithi: “Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.” (Yakobi 4:8) Kula mazwi sifumana isimemo kwakunye nesithembiso.
3. Sisiphi isimemo uYehova asidlulisela kuthi, yaye sisiphi isithembiso esihambisana naso?
3 UYehova uyasimema ukuba sisondele kuye. Ukulungele ukusamkela njengabahlobo. Kwangaxeshanye, usithembisa esithi ukuba sithabatha amanyathelo okusondela kuye, naye uya kwenza ngokufanayo. Uya kusondela kuthi. Ngoko sinokufumana into exabiseke ngokwenene—“ukusondelelana noYehova.” * (INdumiso 25:14) Igama elithi “ukusondelelana” linengcamango yokutyhila iimfihlo kumhlobo okhethekileyo.
4. Unokumchaza njani umhlobo osondeleyo kuwe, yaye uYehova ungqineke njani engumhlobo onjalo kwabo basondela kuye?
4 Ngaba unaye umhlobo osenyongweni onokutyhila kuye iimfihlo zakho? Umhlobo onjalo ngonenkathalo ngawe. Uyamthemba, kuba ungqineke enyanisekile. Uvuyo lwakho luyanda xa usabelana naye ngalo. Ukuphulaphula kwakhe ngovelwano kuyenza lula intlungu yakho. Naxa kungekho namnye oziqondayo iimvakalelo zakho, yena uyaziqonda. Ngokufanayo, xa usondela kuThixo, uya kuba noMhlobo okuxabisa ngokwenene, okukhathalela ngokunzulu, noziqonda ngokupheleleyo iimvakalelo zakho. (INdumiso 103:14; 1 Petros 5:7) Uziva ukhululekile ukuphalazela kuye imbilini yakho, kuba uyazi ukuba unyanisekile kwabo banyanisekileyo kuye. (INdumiso 18:25) Noko ke, eli lungelo lokusondelelana noThixo sinokulinandipha kuphela ngenxa yokuba silivulelwe nguye.
UYehova Uyivulile Indlela
5. Yintoni awayenzayo uYehova ukuze asivulele indlela yokusondela kuye?
5 Ngaphandle koncedo, thina njengaboni besingenakuze sikwazi ukusondela kuThixo. (INdumiso 5:4) “Kodwa uThixo ubonakalisa uthando lwakhe kuthi ngokuthi, ngoxa sasisengaboni, uKristu asifele,” wabhala watsho umpostile uPawulos. (Roma 5:8) Ewe, uYehova walungiselela ukuba uYesu “anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo ngenxa yabaninzi.” (Mateyu 20:28) Ukuba nokholo kwethu kwelo dini lentlawulelo kwenza sikwazi ukusondela kuThixo. Ekubeni uThixo “wasithanda kuqala,” wabeka isiseko sokuba sakhe ubuhlobo naye.—1 Yohane 4:19.
6, 7. (a) Sazi njani ukuba uYehova akangoThixo ozifihlayo nongaziwayo? (b) UYehova uzityhile ngaziphi iindlela?
6 UYehova uye wathabatha nelinye inyathelo: Uye wazityhila kuthi. Kubo nabuphi na ubuhlobo, ukusondelelana kusekelwe ekumazini ngokwenene umntu, uzixabise iimpawu neendlela zakhe. Ngoko ukuba uYehova ebenguThixo ozifihlayo nongaziwayo, besingenakuze sisondele kuye. Kodwa, kunokuba azifihle, ufuna ukuba simazi. (Isaya 45:19) Ngaphezu koko, uzityhila kubantu bonke, nakwabo bajongelwa phantsi kweli hlabathi.—Mateyu 11:25.
UYehova uzityhile ngemisebenzi yakhe yendalo nangeLizwi lakhe elibhaliweyo
7 Uzityhile njani uYehova kuthi? Indalo yakhe isazisa ngeenkalo ezithile zobuntu bakhe—ubukhulu bamandla akhe, ubunzulu bobulumko bakhe, nobukhulu bothando lwakhe. (Roma 1:20) Kodwa uYehova akazityhili ngendalo yakhe kuphela. Njengoko engoYena Ubalaseleyo Kwezonxibelelwano, uye wazityhila ngokulungiselela iLizwi lakhe elibhaliweyo, iBhayibhile.
Ukubona “Ukuthandeka KukaYehova”
8. Kutheni kunokuthiwa iBhayibhile ngokwayo ibubungqina bokusithanda kukaYehova?
8 IBhayibhile ngokwayo ibubungqina bokusithanda kukaYehova. ELizwini lakhe, uzityhila ngokusebenzisa amagama esinokuwaqonda—nto leyo engebubo nje ubungqina bokusithanda kwakhe kodwa ekwabonisa ukuba ufuna simazi size simthande. Oko sikufundayo kule ncwadi ixabisekileyo kusenza sibone “ukuthandeka kukaYehova” yaye kusishukumisela ekubeni sifune ukusondela kuye. (INdumiso 90:17) Makhe sixubushe ngezinye iindlela ezibangel’ imincili uYehova azityhila ngazo eLizwini lakhe.
9. Yiyiphi imizekelo yeengxelo ezingqalileyo eBhayibhileni ezichaza iimpawu zikaThixo?
9 IZibhalo zineengxelo ezininzi ezingqalileyo ezichaza iimpawu zikaThixo. Phawula imizekelo embalwa. “UYehova ngumthandi wokusesikweni.” (INdumiso 37:28) UThixo “uphakamile ngamandla.” (Yobhi 37:23) “‘Ndinyanisekile,’ utsho uYehova.” (Yeremiya 3:12) “Ulumkile entliziyweni.” (Yobhi 9:4) ‘UnguThixo onenceba nobabalo, ozeka kade umsindo, onobubele bothando oluninzi nenyaniso.’ (Eksodus 34:6) “Wena, Yehova, ulungile yaye ukulungele ukuxolela.” (INdumiso 86:5) Yaye njengoko kubonisiwe kwisahluko esingaphambili, olona phawu lubalaseleyo lolokuba: “UThixo uluthando.” (1 Yohane 4:8) Njengoko ucamngca ngezi mpawu zithandekayo, ngaba akuziva utsalelekile na kulo Thixo ungenakuthelekiswa nanto?
IBhayibhile iyasinceda sisondele kuYehova
10, 11. (a) Ukusinceda sibubone ngokucace ngakumbi ubuntu bakhe, yintoni uYehova aye wayiquka eLizwini lakhe? (b) Nguwuphi umzekelo oseBhayibhileni osincedayo ukuba sibe nombono wokusebenzisa kukaThixo amandla akhe?
10 Ukongezelela ekusixeleleni ngeempawu zakhe, uYehova uye waquka eLizwini lakhe imizekelo engqalileyo yendlela azibonakalisa ngayo ezi mpawu. Ezo ngxelo zisinika imifanekiso-ngqondweni engacimiyo esincedayo ukuba sizibone ngokucace ngakumbi iinkalo ezahlukahlukeneyo zobuntu bakhe. Oko kuyasinceda ukuba sisondele kuye. Khawuphawule umzekelo woku.
11 Kuyenye into ukufunda ukuba uThixo “womelele ngamandla.” (Isaya 40:26) Kanti kuyenye into ukufunda ngendlela awamhlangula ngayo uSirayeli ngokumweza kuLwandle Olubomvu waza walulondoloza olo hlanga kangangama-40 eminyaka entlango. Unokuba nombono wezo zantyalantyala zamanzi zisahlukana phakathi. Unokuba nomfanekiso-ngqondweni wolo hlanga—mhlawumbi izi-3 000 000 zonke—luhamba emhlabeni owomileyo elwandle, luphahlwe ngamanzi afana neendonga eziphakamileyo macala omabini. (Eksodus 14:21; 15:8) Unokububona ubungqina bokulukhusela kukaThixo entlango. Kwaphuma amanzi eliweni. Kwavela ukutya emhlabeni, okwakufana nembewu emhlophe. (Eksodus 16:31; Numeri 20:11) Apha uYehova akatyhili nje kuphela amandla akhe kodwa kwanokuba uwasebenzisa ekuncedeni abantu bakhe. Ngaba akukhuthazi na ukwazi ukuba imithandazo yethu iya kuThixo owomeleleyo ofana ‘nendawo yokusabela namandla kuthi, uncedo olufumaneka ngokukhawuleza ekubandezelekeni’?—INdumiso 46:1.
12. UYehova usinceda njani ukuba “simbone” ngendlela esinokuyiqonda?
12 UYehova, ongumoya, wenze okungakumbi ukusinceda simazi. Njengabantu sibona kuphela izinto ezibonakalayo yaye asikwazi ukubona kummandla womoya. Ukuba uThixo ebenokuchaza ubume bakhe bomoya, oko bekuya kufana nokuzama ukuchaza imbonakalo yakho, njengebala lamehlo okanye lamachokoza asemzimbeni wakho, kumntu ozelwe eyimfama. Kunoko, uYehova ngobubele uyasinceda ukuba “simbone” ngendlela esinokuyiqonda. Maxa wambi, usebenzisa intetho ebusafobe nemizekeliso, azifanise nezinto esizaziyo. Ude azichaze njengoneempawu ezithile zabantu. *
13. Nguwuphi umfanekiso-ngqondweni asizobela wona uIsaya 40:11, yaye ukuchaphazela njani wena?
13 Phawula indlela achazwa ngayo uYehova kuIsaya 40:11: ‘Njengomalusi uya kuwalusa umhlambi wakhe. Ngengalo yakhe uya kuwaqokelela ndawonye amatakane; uya kuwathwala ngesifuba sakhe.’ Apha uYehova ufaniswa nomalusi othwala amatakane ‘ngengalo yakhe.’ Oku kubonisa amandla kaThixo okubakhusela nokubaxhasa abantu bakhe, kwanabona babuthathaka. Sinokuziva sikhuselekile kwiingalo zakhe ezomeleleyo, kuba ukuba sinyanisekile kuye, akasayi kuze asishiye. (Roma 8:38, 39) UMalusi Omkhulu uwathwala amatakane ‘ngesifuba sakhe’—binzana elo elibhekisela kumphetho wengubo yangasentla, awayethi maxa wambi umalusi afake kuwo itakane elisandul’ ukuzalwa. Ngoko siyaqinisekiswa ukuba uYehova usixabisile yaye uyasithantamisa. Ngoko kuyinto ezenzekelayo ukuba sifune ukusondela kuye.
‘UNyana Uyathanda Ukumtyhila’
14. Kutheni kunokuthiwa uYehova uzityhila ngokubalaseleyo ngokusebenzisa uYesu?
14 ELizwini lakhe, uYehova uzityhila ngendlela ebalaseleyo ngokusebenzisa uNyana wakhe oyintanda, uYesu. Akukho namnye obenokusibonisa iingcinga neemvakalelo zikaThixo ngokucace ngakumbi kunokuba uYesu wenzayo. Ngapha koko, loo Nyana wamazibulo wabakho ecaleni kukaYise ngaphambi kokudalwa kwezinye izidalwa zomoya kunye nendalo ebonakalayo. (Kolose 1:15) UYesu wayeqhelene ngokusondeleyo noYehova. Kungenxa yoko le nto wakwazi ukuthi: “Akukho bani umaziyo uNyana ngaphandle kukaBawo; kungekho nabani umaziyo uBawo ngaphandle kukaNyana, nalowo uNyana athanda ukumtyhila kuye.” (Luka 10:22) Xa wayesemhlabeni njengomntu, uYesu wamtyhila uYise ngeendlela ezimbini ezibalulekileyo.
15, 16. Ziziphi iindlela ezimbini uYesu awamtyhila ngazo uYise?
15 Okokuqala, iimfundiso zikaYesu ziyasinceda ukuba simazi uYise. UYesu wamchaza uYehova ngamazwi achukumis’ intliziyo. Ngokomzekelo, ekuchazeni kwakhe uThixo onenceba nobamkelayo aboni abaguqukayo, uYesu wamfanisa uYehova nobawo oxolelayo ochukunyiswa ngokunzulu kukubona unyana wakhe wolahleko obuyileyo kangangokuba ade abaleke ukuya kunyana wakhe aze awele entanyeni yakhe, amange. (Luka 15:11-24) Kwakhona uYesu umchaza uYehova njengoThixo ‘obatsalela’ kuye abantu abantliziyo zilungileyo ngenxa yokuba ebathanda. (Yohane 6:44) Uyazi kwanaxa ungqatyana omncinane ewela emhlabeni. UYesu wachaza wathi: “Musani ukoyika: Nixabiseke ngaphezu koongqatyana abaninzi.” (Mateyu 10:29, 31) Ngokuqinisekileyo siziva sitsalelekile kuThixo onenyameko ngolo hlobo.
16 Okwesibini, umzekelo kaYesu uyasibonisa uhlobo lomntu uYehova alulo. UYesu wamfanekisela ngokugqibeleleyo uYise kangangokuba wathi: “Lowo undibonileyo mna umbonile noBawo.” (Yohane 14:9) Ngaloo ndlela, xa sifunda ngoYesu kwiincwadi zeVangeli—iimvakalelo awazibonakalisayo nendlela awaqhubana ngayo nabanye—eneneni sibona umfanekiso kaYise. UYehova ebengenakusinika isityhilelo esicace ngakumbi seempawu zakhe kunoko. Ngoba?
17. Zekelisa oko uYehova akwenzileyo ukuze asincede siqonde uhlobo lomntu alulo.
17 Ngokomzekelo: Khawuzithelekelele nje uzama ukucacisa ukuba buyintoni ububele. Unokubuchaza ngamazwi. Kodwa ukuba walatha kubani othile owenza isenzo sobubele uze uthi, “Nguwo ke lowa umzekelo wobubele,” igama elithi “ububele” licaca ngakumbi lize liqondeke ngokulula. UYehova wenze okufanayo ukuze asincede siqonde uhlobo lomntu alulo. Uzichaze ngamazwi, waza wasinika nomzekelo ophilayo woNyana wakhe. KuYesu sibona ukusebenza kweempawu zikaThixo. Eneneni, ngeengxelo zeVangeli ezichaza uYesu, uYehova uthi: ‘Yindlela endiyiyo ke leya.’ Ingxelo ephefumlelweyo imchaza njani uYesu ngoxa wayesemhlabeni?
18. UYesu walubonakalisa njani uphawu lwamandla, okusesikweni nobulumko?
18 Iimpawu ezine ezibalaseleyo zikaThixo zibonakala kakuhle kuYesu. Wayenamandla okuphelisa izifo, indlala, kwanokufa. Ukanti, ngokungafaniyo nabantu abawasebenzisa kakubi amandla abo, akazange enze imimangaliso yamandla ukwenzela ingenelo yobuqu okanye ukuze enzakalise abanye. (Mateyu 4:2-4) Wayekuthanda okusesikweni. Wazaliswa yingqumbo yobulungisa xa wabona abarhwebi abangamaqhophololo bexhaphaza abantu. (Mateyu 21:12, 13) Wabaphatha ngokungenamkhethe abahlwempuzekileyo nabahlelelekileyo, ebanceda ukuba ‘bayifumanele ukuhlaziyeka’ imiphefumlo yabo. (Mateyu 11:4, 5, 28-30) UYesu wabonisa ubulumko obungathethekiyo kwiimfundiso zakhe, “ngaphezu koSolomon.” (Mateyu 12:42) Kodwa uYesu akazange aqhayise ngobulumko bakhe. Amazwi akhe afikelela iintliziyo zabantu abaqhelekileyo, kuba iimfundiso zakhe zazicacile, zilula, yaye ziyasebenziseka.
19, 20. (a) UYesu waba nguwo njani umzekelo obalaseleyo wothando? (b) Njengoko sifunda yaye sicingisisa ngomzekelo kaYesu, sifanele sikhumbule ntoni?
19 UYesu wayengumzekelo obalaseleyo wothando. Ebudeni babo bonke ubulungiseleli bakhe, walubonakalisa uthando ngeendlela ezininzi, kuquka uvelwano nemfesane. Wayengakwazi ukubona ukubandezeleka kwabanye aze angabi novelwano. Kangangezihlandlo ezininzi, olo velwano lwalumshukumisela ekubeni enze okuthile. (Mateyu 14:14) Nangona waphilisa abagulayo waza wondla abalambileyo, uYesu wabonisa imfesane ngendlela ebaluleke ngakumbi. Wanceda abanye ukuba bayazi, bayamkele, yaye bayithande inyaniso ephathelele uBukumkani bukaThixo, obuya kuzisela uluntu iintsikelelo ezihlala zihleli. (Marko 6:34; Luka 4:43) Ngaphezu koko, uYesu wabonisa uthando lokuzincama ngokuthi anikele ngomphefumlo wakhe ngenxa yethu.—Yohane 15:13.
20 Ngoko, ayimangalisi into yokuba abantu bobudala nabeemvelaphi ezahlukeneyo bazive betsalelekile kulo mntu unobubele neemvakalelo ezinzulu. (Marko 10:13-16) Noko ke, njengoko sifunda yaye sicingisisa ngomzekelo kaYesu, masihlale sikhumbula ukuba kulo Nyana sibona umfanekiso ocacileyo kaYise.—Hebhere 1:3.
21, 22. Yintoni ebandakanyekileyo ekufuneni uYehova, yaye yintoni equlethwe yile ncwadi ukuze isincede kuloo nkalo?
21 Ngokuzityhila kwakhe ngokucace kangaka eLizwini lakhe, uYehova wenza kucace ukuba ufuna sisondele kuye. Kwangaxeshanye, akasinyanzeli ukuba sifune ulwalamano olukholekileyo naye. Kuxhomekeke kuthi ukumfuna uYehova “ngoxa esenokufunyanwa.” (Isaya 55:6) Ukufuna uYehova kubandakanya ukwazi iimpawu neendlela zakhe njengoko zityhilwe eBhayibhileni. Le ncwadi oyifundayo ngoku yenziwe ngenjongo yokukunceda kule nkalo.
22 Uya kuphawula ukuba le ncwadi yahlukaniswe ngokwamacandelo eempawu ezine eziyintloko zikaYehova: amandla, okusesikweni, ubulumko nothando. Candelo ngalinye liqalisa ngoshwankathelo lophawu ngalunye. Izahluko ezimbalwa eziphantsi kwelo candelo zixubusha ngendlela uYehova alubonakalisa ngayo olo phawu ngokweenkalo zalo ezahlukahlukeneyo. Candelo ngalinye likwaqulethe izahluko ezibonisa indlela uYesu awalubonisa ngayo olo phawu, kunye nesahluko esibonisa indlela thina esinokulubonisa ngayo ebomini bethu.
23, 24. (a) Chaza icandelo elikhethekileyo elithi “Imibuzo Onokucamngca Ngayo.” (b) Ukucamngca kusinceda njani sisondele ngakumbi kuThixo?
23 Ukususela kwesi sahluko, kukho icandelo elikhethekileyo elinomxholo othi “Imibuzo Onokucamngca Ngayo.” Ngokomzekelo, khangela kwibhokisi ekwiphepha 24. Izibhalo nemibuzo elapho asiyompinda yesi sahluko. Kunoko, injongo yayo kukukunceda ukuba ucamngce ngezinye iinkalo ezibalulekileyo zombandela lowo. Unokulisebenzisa njani ngokuyingenelo eli candelo? Tyhila sibhalo ngasinye esilapho, uze usifunde ngokucokisekileyo. Emva koko qwalasela umbuzo olandela isibhalo ngasinye. Zama ukucingisisa iimpendulo. Usenokwenza nophando. Zibuze imibuzo eyongezelelekileyo, njengokuthi: ‘Indixelela ntoni le nkcazelo ngoYehova? Ibuchaphazela njani ubomi bam? Ndinokuyisebenzisa njani ukunceda abanye?’
24 Ukucamngca ngolo hlobo kunokusinceda sisondele ngakumbi kuYehova. Ngoba? IBhayibhile inxulumanisa ukucamngca kunye nentliziyo. (INdumiso 19:14) Xa sicamngca ngokunoxabiso ngoko sikufundayo ngoThixo, inkcazelo leyo yendela nzulu entliziyweni yethu yokomfuziselo, ize ichaphazele indlela esicinga ngayo, ishukumise iimvakalelo zethu, ize ekugqibeleni isishukumisele ekubeni sithabathe inyathelo. Uthando lwethu ngoThixo luyanda, yaye olo thando lusishukumisela ukuba sifune ukumkholisa njengoMhlobo wethu osenyongweni. (1 Yohane 5:3) Ukuze sibe nolwalamano olunjalo, simele sizazi iimpawu neendlela zikaYehova. Noko ke, okokuqala masixubushe ngenkalo yobuntu bukaThixo esisizathu esinamandla sokuba sisondele kuye—ubungcwele bakhe.
^ isiqe. 3 Okubangel’ umdla kukuba, igama lesiHebhere eliguqulelwe ngokuthi “ukusondelelana” lisetyenzisiwe kuAmosi 3:7, othi iNkosi enguMongami uYehova iyawutyhila “umcimbi wayo oyimfihlo” kubakhonzi bayo, ibazisa kwangaphambili oko inenjongo yokukwenza.
^ isiqe. 12 Ngokomzekelo, iBhayibhile ithetha ngoThixo njengonobuso, amehlo, iindlebe, amathatha, iingalo neenyawo. (INdumiso 18:15; 27:8; 44:3; Isaya 60:13; Mateyu 4:4; 1 Petros 3:12) Asimele siwathabathe ngokoqobo loo mabinzana okomfuziselo, njengokuba singakuthabathi ngokoqobo ukuthi uYehova ‘unguLiwa’ okanye ‘ulikhaka.’—Duteronomi 32:4; INdumiso 84:11.
INdumiso 15:1-5 Yintoni uYehova ayilindeleyo kwabo bafuna ukuba ngabahlobo bakhe?
INdumiso 34:1-18 Ngoobani asondeleyo kubo uYehova, yaye yiyiphi intembelo abanokuba nayo kuye?
INdumiso 145:18-21 Nguwuphi umsebenzi oya kusenza sisondele kuYehova?
2 Korinte 6:14–7:1 Yihambo enjani ebalulekileyo ukuze silondoloze ulwalamano olusondeleyo noYehova?
Ngaba UYehova Ukukhathalele?
Ngaba awukholelwa ukuba uThixo uxabise mntu ngamnye? Amazwi kaYesu akuYohane 6:44 angqina ukuba uThixo ukhathalele ngamnye wethu.